IPhone 6x13 News Podcast: iPad Pro iyo vs. Samsung Galaxy Aragtida | Wararka IPhone
IPhone 6 × 13 News Podcast: iPad Pro iyo vs. Samsung Galaxy View
Toddobaadkan waxaan fursad u helnay inaan tijaabinno labada kiniin ee xilligan: the 18,4-inch Samsung Galaxy View iyo 12,9-inch iPad Pro. Waa kiniinno loogu talagalay suuqyo kala duwan, laakiin xitaa sidaas awgeed waxaan awoodnay inaan dhisno isbarbardhigyo naqshadeynta, ergonomics, isticmaalka maalinlaha ah, codsiyada la heli karo iyo waxqabadka. Barnaamijka maanta, Pablo ortega Aragtidaada si macquul ah u sheeg.
Waxaan ku siinaynaa aragti yar oo ah waxa aad ku maqli doontaan podcastkan: the Samsung Galaxy View waa aalad xoogaa yaab leh iyo in si dhib leh lagu guuleysan doono. Laakiin iPad Pro ma noqon doono kiniinkaas kacaan ee xallin doona baahiyadeenna maalinlaha sidoo kale. Kiniiniga cusub ee Apple wuxuu leeyahay suuq aad u gaar ah.
Waxaan u mahadcelineynaa AT&T oo nasiiyay amaahda Samsung Galaxy View si aan u tijaabino dhowr maalmood.
Dhegeyso iPhone News Podcast toddobaad kasta iTunes Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » IPhone 6 × 13 News Podcast: iPad Pro iyo vs. Samsung Galaxy View
Sida loo sahlo trackpad keyboard-ka hore ee iPhone
Twitter-ka ayaa dhawaan fududaan doonta in laga helo Apple TV